News & Info | Arakan Liberation Party
Arakan Literation Party (ALP)
Religion in Arakan
Arakan Liberation Party » News & Info
ရက်အနည်းငယ်ရပ်နားထားခဲ့တဲ့ ကျောက်ဖြူ သမိုင်းဝင်ကျောက်တလုံး ဘုရားတောင်ပြန်လည်း မိုင်းခွဲ
မီဒီယာတွေက သတင်းဖေါ်ပြပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ရက်အတန်ငယ်ကြာ ရပ်နားထားခဲ့တဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့ သမိုင်းဝင် ကျောက်တစ်လုံး ဘုရားတောင်ကို ဒီကနေ့ နံနက်က စပြီး ပြန်လည် မိုင်းခွဲနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ် ကနေ စပြီး မိုင်းခွဲနေတယ်လို့ အဲဒီ မိုင်းခွဲတဲ့ နေရာ အနီးက ဒီကနေ့ ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေကို ကိုးကားပြီး ကျောက်ဖြူ ဒေသခံ ဦးသန္တာမောင် (more...) … Read entire article »
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ/တပ်မတော်မှ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ (၅) ရက်ကြားလေ့လာရေးခရီး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ခိုင်စိုးနိုင် ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သွားရောက်လေ့လာ၊
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ALA) မှ
ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်စိုးနိုင် ဦးစီးသော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တဖွဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ၁၅၊ ၂၊ ၂၀၁၃ မှ ၁၉၊၂၊၂၀၁၃ ထိ (၅) ရက်ကြာ လေ့လာရေးခရီးစဉ်တခုကိုသွားရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းခရီးစဉ်တွင် ကိုယ်စားလှယ် (၇) ဦးပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုယ်စားလှယ်များမှာ-ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)၊ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ALA) ဗဟိုဌာနချုပ်မှ(၁)-ဗိုလ်မှူးကြီးခိုင်စိုးနိုင် (more...) … Read entire article »
ကင်တားနား တချိန်တည်းတွင် ရခိုင်၊ ကုလား နှစ်မျိုးလုံးကို စစ်တွေဟိုတယ်တွင် တွေ့ဆုံ
ကင်တားနား ၊ Ashok Migan တို.နှင့် စစ်တွေမြို.မိမြို.ဖ (၁၆)ဦး ၊ ကုလားတစ်အုပ်စု တို. ယနေ. ၁၂-၂-၂၀၁၃ နေ.လည် ၁း၃၀ နာရီ မှ ၃း၀၀ နာရီထိ စစ်တွေဟိုတယ် ၌ တွေ.ဆုံ ။ ထိုတွေ.ဆုံမှု သည် ဒေသခံရခိုင်များနှင့် ကင်တားနား တို.၏ ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ.ဆုံမှုဖြစ်သည်။
ကင်တားနား သည် ထူးဆန်းစွာ ဘင်္ဂလီ ဟုသာ ဆက်တိုက် သုံးစွဲ ပြောဆိုသွား ။ သို.သော် ကုလား ဟုမသုံးစွဲကြရန် မေတ္တာရပ်ခံ။
ပဋိပက္ခအလွန် နှစ်ဘက်အုပ်စု ဆက်လက်မည်သို.မည်ပုံ နေထိုင်ရမည် ကို မိမိတို.အချင်းချင်းသာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမည့်ကိစ္စသာဖြစ်၍ ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ.အစည်းများ ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းပေး၍ မရနိုင်ကြောင်း ၊ မိမိသည် မည်သည့်လူ.အဖွဲ.အစည်းတွက်မဆို အခြေခံလူ.အခွင့်အရေး ကိုသာ လေ့လာဆန်းစစ်ပါကြောင်း ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းမျာရှိ လူများ၏ အခြေအနေကို အလွန်အမင်းစိုးရိမ်မိ ဟုပြောကြားသည်။
UN ဋ္ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ashok Migan က ပြောကြားရာတွင် ရခိုင်လူမျိုး တို.၏ UNအဖွဲ.အစည်းများအပေါ် မယုံကြည်မှုကို မိမိနားလည်စာနာ ပါကြောင်း ၊ UN ၏ အလုပ်များသည် ပွင့်လင်းမြင်သာရမည် ၊လူသားချင်းစာနာဖို. နှင့် ညီမျှမှု ရှိဖို.လိုအပ်ပါကြောင်း ၊ UN နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများ ကြားတွင် နားလည်မှု တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း ပြောကြားသည် ။
စစ်တွေမြို.မိမြို.ဖများကိုယ်စား ဦးသာပွင့် က လူ.အခွင့်အရေးသာမက တိုင်းရင်သားအခွင့်အရေးပါ အမှန်တကယ် ချိုးဖေါက်ခံနေရသူများမှာ မိမိတို. ရခိုင်လူမျိုးများသာဖြစ်ကြောင်း ၊ လူသားပုံမှန်မျိုးပွားနှူံးဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဤမျှ ဘင်္ဂလီဦးရေများပြားလာနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း ၊ တဖက်နိုင်ငံသည်သာ လူ.အခွင့်အရေး ကျေညာစာတန်း အပိုဒ် ၁၃(၂) ကို ချိုးဖေါက်နေကြောင်း ၊ UN … Read entire article »
မောင်တောတွင် ဘင်္ဂလီ ကုလားများ ရခိုင်ရွာ တစ်ရွာကို ဓါး၊ သေနတ် များဖြင့် ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်။ ရခိုင်အနည်းဆုံး တစ်ဦးသေ
ဖေဖော်ဝါရီလ (၉)ရက် ယမန်နေ့ ည ၁၂ နာရီဝန်းကျင်ခန့် တွင် ဘင်္ဂလီကုလား (၁၅) ယောက် ခန့်သည် မောင်တောမြို့ နယ် ငခူရရွာသစ် ( ရောင်ဘူ)ရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဓါး၊ သေနတ်များဖြင့်
တိုက်ခိုက် သဖြင့် ရခိုင် အမျိုးသား တစ်ဦး သေဆုံးပြီး အခြားရခိုင်လူမျိုး သုံးဦးဒဏ်ရာရရှိသွားသည်။
သေဆုံးသူမှာ စစ်တွေ ဇာတိဖြစ်သူ ဦးမောင်အေးဖြစ်ပြီး အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ရောက်ရှိနေစဉ် တိုက်ခိုက်ခံ ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူ သုံးဦးအနက် ဒဏ်ရာပြင်းထန်သော ဦးဘတင်အား ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ရှိသော ဘူးသီးတောင်ဆေးရုံသို့ ယူဆောင်ရန်စီစဉ်နေပြီး ကျန်နှစ်ဦးအား မောင်တောဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကု သနေရကြောင်းသိ၇ှိ၇ပါသည်။
ဗိုလ်မင်းထောင် ဗိုလ်မင်း ကျော်သန်းဖြူ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်
မြန်မာ- ရခိုင် သမိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသာ ဗိုလ်မင်း KS ဖြူ (၇၈) နှစ် သည် လွန်ခဲ့သည့် ရက် ညနေပိုင်း အနည်းငယ်ဖျားနာရာမှ ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ကာ ရွာတော်မြို့ (more...) … Read entire article »
စစ်တေ ရခိုင်ရိုးရာ ရထားဆွဲပွဲ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့တွင်တွင် ကျင့်ပမည်
စစ်တွေမြို့တွင် ဒုတိယ အကြိမ်မြှောက် ကျင်းပမည့် ရခိုင်ရိုးရာ ရထားဆွဲပွဲကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် စစ်တွေမြို့ ရွာကြီးတောင် ရပ်ကွက် ရထားဆွဲပွဲ ကော်မီတီဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီးနောက် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပရန် သတ်မှတ် (more...) … Read entire article »
စစ်တွေဆိပ်ကမ်း လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ရခိုင်လူငယ် Essar မှ လျော်ကြေးမရသေး
အိန္ဒိယက တည်ဆောက်နေတဲ့ စစ်တွေဆိပ်ကမ်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တဲ့ ရခိုင် လူငယ် တစ်ဦးဟာ ဒဏ်ရာ ရတာ ရက်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ရှိ လာပေမယ့် ခုအချိန်ထိ လျော်ကြေးငွေ တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
စစ်တွေမြို့ ချင်းပျံလမ်း ကျောင်းကြီးလမ်းရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ မောင်နေရင် ကျော်(အသက်-၂၅နှစ်)ဟာ စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်နေစဉ် ၂၀၁၃ (more...) … Read entire article »
ကျောက်တော်တွင် စစ်တွေမှလာသော ကင်းစတားကားတွင် ဘင်္ဂလီကုလားများသို့ပို့သော ပစ္စည်းများဖမ်းဆီးရမိ
၂၀၁၃ - ၁- ၅ ရက်နိ ညနေ (၅)တွင် စစ်တွေမှကျောက်တော်သို့ လာသော ကင်းစတား ခရီး သည်တင်ကားတွင် ဘင်္ဂလီကုလားများအတွက်ပို့သော ပစ္စည်းများဖမ်းဆီးရမိသည်။ ၎င်းပစ္စည်း များကို ကျောက်တော်ကားဂိတ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းပစ္စည်းမှာ အမှတ်(၈၁၈) ဆက်သွယ်ရေးတပ်ရင်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသူ မမြင့်မြင့်ခိုင်မှ ကျောက်တော်မြို့ ဒေါ်မသန်းရီ ထံသို့တဆင့်ခံပို့ကာ (more...) … Read entire article »
မြောက်ဦး ညမထွက်ရ အချိန်လျှော့ချ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြီး ညမထွက်ရဟု သတ်မှတ် ထားသောအချိန်ကို ယခုအခါ ၂ နာရီ နောက်ထပ် လျှော့ချပေးလိုက်သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
အရင်က ည ၈ နာရီကနေ မနက် ၆ နာရီထိပါ။ အခုတော့ ည ၁၀ နာရီ (more...) … Read entire article »
ပထမအကြိမ် ရခိုင်နယ်စပ်ဒေသ အာစရိယပူဇော်ပွဲ နံသာတောင်တွင်ကျင့်ပ
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် နယ်စပ် မောင်တောမြို့မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော နံသာတောင် ကျေးရွာ နယ်စပ်ဒေသ ပရဟိတ စာသင်တိုက်တွင် ပထမဆုံး အကြိမ် အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားတခုကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့က ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
အာစရိယ ပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဒီဒေသဟာ ဝေးလံခေါင်းပါးတဲ့ ဒေသဖြစ်တဲ့ အတွက် လူတွေဟာ အသိစိတ်ဓါတ်၊ အမြော်အမြင်တွေ (more...) … Read entire article »
တောင်ကုတ် နေပူတောင်ကျောက် ဗီယတ်နမ် ကုမ္ပဏီ တခုမှထုတ်လုပ်မည်
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းခန့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့် စီမံကိန်း တစ်ခုကို ဗီယက်နမ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ် နေပူတောင် မာဘဲလ် ကျောက်ချော ထုတ်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသွားမည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီမှာ ဗီယက်နမ်နှင့် မြန်မာ ဖက်စက် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အမည်မှာ Myanmar SIMCO Song Da Limited Joint Stock Company ဖြစ်သည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီ (more...) … Read entire article »
ရဲများ နှင့် နောက်ဆုံးအချိန် တွေ့ခဲ့ရသူ စစ်တွေ လူငယ်တစ်ဦး၏ အလောင်းကို နောက်တစ်နေ့မနက် လမ်းမပေါ်တွေ့ရ
စစ်တွေ ၊ ၀၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ ယမန်နေ့ ဖေဖေ၀ါရီလ (၃) ရက် ည ဆယ့်တစ်နာရီခန့်အချိန်တွင် စစ်တွေမြို့ ရွာကြီးမြောက်ရပ်ကွက်တွင် ရဲများ လိုက်ဖမ်းသဖြင့် ထွက်ပြေးခဲ့သူ လူငယ်တစ်ဦးမှာ နောက်တစ်နေ့မနက် တွင် နောက်တစ်နေရာ၌ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
စစ်တွေမြို့ ကုန်တန်းရပ်ကွက်နေ အသက် (၁၉) နှစ် အရွယ် ကျော်ဇံသက် (ခေါ်) အာနိုးသည် သူငယ်ချင်း နှစ်ဦး နှင့်အတူ မိန်းကလေးအဆောင် တစ်ဆောင် အနီး၌ ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုနေကြစဉ် ည ဆယ့်တစ်နာရီခွဲခန့် တွင် ရဲများရောက်လာသဖြင့် ထွက်ပြေးကြရာ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦး နှင့် ကျော်ဇံသက် တို့မှာ လမ်းကွဲသွားခဲ့ကြသည် ဟုဆိုသည်။
ည ဆယ်နာရီ ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားသည့် စစ်တွေမြို့အခြေအနေအရ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးမှာ အနီးအနား အသိအိမ်တစ်အိမ်တွင် အိပ်လိုက်ကြပြီး မနက်မိုးလင်းကျမှ ကျော်ဇံသက်သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည် ဟု ဆိုသည်။ ယနေ့ မနက်ပိုင်း အလောင်းတွေ့ရာ နေရာနှင့် အနီးဆုံးအိမ်ကလည်း သည်နေ့ အာရုံမတက်မီ မနက် အစောကြီး တစ်နာရီ အထိ အလောင်းမှာ ယင်းနေရာတွင် ရှိမနေသေးကြောင်း၊ ထိုအချိန်နှင့် အလောင်းမတွေ့မီ အချိန်အကြား ဘာမှ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဆူဆူညံညံ မကြားလိုက်မိကြောင်း ထွက်ဆိုကြသည် ဟု ဆိုသည်။ သေဆုံးသူ ကျော်ဇံသက်မှာ ထော်လာဂျီမောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၄င်း၏ဖခင် ဦးလှမောင်သိန်း (ခေါ်) ၀မ်းဖားမှာ ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၂-ခုနှစ် ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့က စစ်တွေ အမှတ်(၁) ရဲစခန်းရှေ့တွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားစဉ် နားတစ်ဖက်ကို ကျည်ဆံပွတ်ဖောက်သွားသဖြင့် စစ်တွေဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူပြီးနောက်ပိုင်းကျမှ၊ ထိုနေ့ ရဲစခန်းရှေ့ဆူပူမှုတွင် ပါဝင်သည် ဟု … Read entire article »
မောင်တောမြို့နယ် နယ်စပ် GE ဆောက်လုပ်ရး နယ်မြေအတွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါး
ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်တောမြို့တွင် မနေ့က (24.1.2013-ကြာသပတေးနေ့) ည ရး၀၀ နာရီခန့် တွင်မြန်မာ-ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နယ်စပ်ဖြစ်သော ဗန္ဓုလကျေးရွာ(ယခင်GEတပ် မှ ၃ ဦး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သောနေရာအနီး)တွင် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးတည်ဆောက် နေသော လမ်းတံထားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ လက်နက်ကိုင် ဘင်္ဂါလီ ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူများက ခြုံခိုပြီး သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ (more...) … Read entire article »
စစ်တွေမှ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် အဆိပ်များတွေ့၍ ရဟန်တော်အဖွဲ့က ပြည်နယ်အစိုးရကိုတင်ပြ
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့သို့ နယ်မှ တင်သွင်းနေသော ဟင်းသီးဟင်းသီးများတွင် အဆိပ်များ ပါဝင်နေသဖြင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ရန် ရဟန်းတော်များက ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ကို ယနေ့တွင် တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ရဟန်းတော်များ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးကေသာရက ပြောသည်။
ဦးဇင်းတို့က အဆိပ်တွေ ပါနေတဲ့ ဘူးသီးတွေကို လူကြီးတွေဆီကို ယူသွားတယ်။ သူတို့ကို တင်ပြတယ်။ ဒီမှာကြည့်ကြပါ။ လက်တွေ့ပြပြီး ဘူးသီးတွေမှာ အဆိပ်ပါနေတယ်ဆိုတာကို သူတို့ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးကေသာရက ပြောသည်။
သွားရောက်တင်ပြခဲ့ကြသော ရဟန်းတော်များ အထဲတွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့မှ ဥက္ကဌ ဦးဥာဏ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးကေသာရ၊ အရှင် ဦးဓမ္မဓဇ၊ အရှင် ပညာဓဇ စသည့် ရဟန်းတော် (၅) ပါး ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ ဦးဇင်းတို့ဆီက ရဟန်း ၅ ပါး ပါဝင်တယ်။ အစိုးရဘက်ကတော့ နယ်စပ်ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ထိန်လင်း ပါတယ်။ ပြည်နယ် ရဲမှူးကြီးလည်း ပါတယ်။ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်း ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့မှ လူကြီးများကို တင်ပြရခြင်းမှာ အာဏာပိုင်များဘက်မှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်နေ၍ ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇင်းက ဆိုသည်။
“ စစ်တွေမှာ သဲချောင်းဘက်က ၀င်လာတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ အဆိပ်တွေ ပါနေတဲ့ အတွက် ရဟန်းတော်တွေက မနက်တိုင်း စစ်တွေကို ၀င်လာတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စစ်ဆေးတယ်။ ဒါကို ရဲအဖွဲ့က ရဟန်းတော်တွေ လုပ်စရာ မလိုဘူး။ သူတို့ဘဲ လုပ်ပါမယ်လို့ ပြောတယ်။ အခုကျတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ အဆိပ်တွေ ထက်တွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘူးသီးတို့၊ ဖရဲသီးတို့မှာ ပါလာတယ်။ ဒါကြောင့် … Read entire article »
တောာင်ကုတ် ကားတိမ်းမှောက်မှု အနည်းဆုံး လူ ၁၄ ဦးသေဆုံး
အခု နောက်ဆုံး ရရှိတဲ့ သတင်းအရ တောင်ကုတ်မှာ ကားတိမ်းမှောက်တာမှာ လူပေါင်း ၁၄ ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရိုးမပေါ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်း အစပ်။ (ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
အခုအချိန်ထိ အလောင်းတွေကို တောင်အောက်ကနေ တောင်ပေါ်ကို သယ်ယူနေကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေက နိရဉ္စရာကို ပြောပါတယ်။ ဒဏ်ရာရသူက (၂၀) ခန့်ရှိပြီး (more...) … Read entire article »
ရခိုင့်အာဇာနည်သူရဲကောင်း ALP ဥက္ကဌကြီး ခိုင်မိုးလင်း	ဥက္ကဌကြီး ခိုင်မိုးလင်း ဂုဏ်ပြုတေး	အခြေခံစစ်သင်တန်းလေ့ကျင့်မှုတခု
သစ္စာအဓိဌာန် (၃) ရပ်	Slideshow	ဘင်္ဂလီများ၏ လူမျိုးဝါးမျို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်းကို တားဆီးနိုင်မည့် ဗျူဟာများလိုအပ်နေ	မွတ်ဆလင်ပြည်နယ်မှ နိုင်ငံတော်ဆီသို့ စစ်တွေတွင် ခိုင်သုခ၏ ပြည်သူလူထုကို ဟောပြောချက်	သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (statement)	ဖမ်းဆီးရသည့် ကုလားမှ လက်နက်ဟိသည်ဟိုဆို	စစ်သင်တန်း ဗွီဒီယိုဖိုင်တခု	Who's Online1 visitors online now0 guests, 1 bots,0members ဆောင်းပါးများ မြန်မာရို့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်က ရခိုင်ပြည် (၁၇၈၄-၁၈၂၄)
Wikileaks မှပြောသော ရိုဟင်ဂျာနှင့် Al Queda ဆက်နွယ်မှု
ရခိုင်အာဇာနီ ALP ဥက္ကဌ ကြီးခိုင်မိုးလင်း နှင့် မိုးလင်းရာဇာ စစ်ကြောင်း
ရင်နာနာနန့်ပြောလိုက်မေ ရခိုင်သား လူသားစစ်စစ်တို့အား ပေါက်တောမြို့ နယ်တွင် စီစစ်သည့် တနေ့တာ အတွိအကြုံ
ရခိုင်နယ်စပ်ဒေသ ခိုးဝင်သူနှင့် လဒ်ပေးမှုပြဿနာ
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ပယ်ဖျက်ရေးနောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိသလဲ
ရခိုင်ဒေသတွင်းသို့ မွတ်ဆလင်များ ၀င်ရောက်လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်
မြောက်ဦးခေတ်နှောင်း ရခိုင့် သမိုင်း တော်လှန်ရေးခရီးဝယ် (၁) တော်လှန်ရေးခရီးဝယ် (၂) စိတ်ကူးခြောက်ပိဿနှင့်မြောက်ဦးက ဘီလူး Contact us
© 2013 Arakan Liberation Party